Ikhaya - I-Word Foundation • Abashicileli bokucabanga nokubhujiswa
Abashicileli be-THINKING ne-DESTINY
Manje usulungele ukuthola imininingwane ebalulekile kuwe njengomuntu-lokho okuqukethwe encwadini Ukucabanga Nekusasa nguHarold W. Percival, omunye wabacwaningi kakhulu bekhulu le-20th. Ephrintiwe iminyaka engaphezu kwamashumi ayisikhombisa, Ukucabanga Nekusasa ingenye yembubulo ephelele kunazo zonke ethunyelwe ebantwini.
Inhloso eyinhloko yale webhusayithi ukwenza Ukucabanga Nekusasa, kanye nezinye izincwadi zikaMnu. Percival, ezitholakala kubantu bomhlaba. Zonke lezi zincwadi zingase zifundeke manje ku-intanethi futhi zingatholakala kuLabhulali yethu. Uma lokhu kungukuhlola kokuqala kwakho Ukucabanga Nekusasa, ungahle uthande ukuqala ngeSandulelo Sombhali Nesingeniso.
Izimpawu zejometri ezisetshenziswe kuleli sayithi ziveza imigomo yemvelo echazwe futhi echazwe kuyo Ukucabanga Nekusasa. Ulwazi oluningi mayelana nalezi zimpawu lungatholakala lapha.
Yize umlando usikhombisile ukuthi abantu bavame ukuthambekela ekudumiseni nasekukhazimuliseni umuntu onesimo sikaHW Percival, yena uqobo wayemile ekutheni wayengafuni ukuthathwa njengomfundisi. Ubuza ukuthi izitatimende ku- Ukucabanga Nekusasa bahlulelwe yiqiniso elikulowo nalowo muntu; ngakho-ke, uphendulela umfundi kuye ngokwakhe:
Angicabangi ukushumayela kunoma ubani; Angizibheki njengomshumayeli noma uthisha. Uma kungenjalo ukuthi nginesibopho sencwadi, ngingathanda ukuthi ubuntu bami bungabizwa ngokuthi umbhali wayo. Ubukhulu bezihloko enginikela ngazo ulwazi, lukhulula futhi lukhulule ekuzikhukhumezeni futhi luvimbele ukucela ukuthobeka. Ngiyaqaphela ukwenza izitatimende eziyinqaba nokumangalisa ekuziphatheni okungaziwayo nokungafi okusemzimbeni wonke womuntu; futhi ngithatha kalula ukuthi lowo muntu uzokwenqabela ukuthi yini oyithandayo noma engayiyoyenza ngolwazi olwethulwe.
Mayelana ne-HW Percival
Ngicabanga ngalokhu Ukucabanga Nekusasa ukuba yincwadi ebaluleke kunazo zonke futhi eyigugu eshicilelwe kunoma yiluphi ulimi.
Uma ngabe ngidutshulwe esiqhingini futhi ngivunyelwe ukuthatha incwadi eyodwa, lokhu kuyoba yincwadi.
Ukucabanga Nekusasa ingenye yalezi zincwadi ezingapheli ezizobe ziyiqiniso futhi zibalulekile kubantu eminyakeni eyizinkulungwane eziyishumi kusukela manje njengamanje. Ingcebo yayo yengqondo nengokomoya ayinakuphela.
Njengoba nje uShakespeare engxenyeni yazo zonke iminyaka, kunjalo njalo Ukucabanga Nekusasa incwadi ethi Humanity.
Le ncwadi ayiyona yonyaka, noma yekhulu, kodwa yenkathi. Iveza isisekelo sokuziphatha nokuxazulula izinkinga zengqondo eziye zaphazamisa umuntu iminyaka eminingi.
Ukucabanga Nekusasa inikeza ulwazi engangikufunayo isikhathi eside. Kuyinto engavamile, elula futhi ekhuthazayo ebantwini.
Ekufundeni Ukucabanga Nekusasa Ngithola ngimangalisa, ngimangalisa futhi nginesithakazelo esikhulu. Yeka incwadi! Yimiphi imibono emisha (kimi) equkethe!
Ngingakaze ngibe khona, futhi ngiye ngifuna ukucinga iqiniso yonke impilo yami, ingabe ngithole ukuhlakanipha nokukhanya okuningi njengoba ngiqhubeka ngithola Ukucabanga Nekusasa.
Kuze kube yilapho ngitholile le ncwadi angizange ngibonakale ngilesizwe se-topsy-turvy, khona-ke sangilungisa ngokushesha okukhulu.
Noma nini lapho ngizizwa ngidlulela ekudangala ngivula le ncwadi ngandlela-thile futhi ngithola into okumele ngiyifunde enginika ukuphakama kanye namandla engiwadingayo ngaleso sikhathi. Ngempela senza ikusasa lethu ngokucabanga. Yeka indlela ukuphila okungafani ngayo uma sifundiswa ukuthi kusukela ekubelekeni.
I-Percival Ukucabanga Nekusasa kufanele iqede noma yikuphi ukufuna okujulile kwemininingwane ebhaliwe ngempilo. Umbhali ukhombisa ukuthi uyazi ukuthi ukhuluma ngani. Alukho ulimi lwenkolo oluyindida futhi akukho okuqagelayo. Ohluke ngokuphelele kulolu hlobo, uPercival ubhale lokho akwaziyo, futhi wazi okuningi - ngokuqinisekile ngaphezu kwanoma yimuphi omunye umbhali owaziwayo. Uma uzibuza ukuthi ungubani, kungani ulapha, ubunjalo bendawo yonke noma injongo yokuphila ngakho-ke uPercival ngeke akushiye ... Lungela!
Lena enye yezincwadi ezibaluleke kakhulu ezake zibhalwa emlandweni owaziwa futhi ongaziwa wale planethi. Imibono nolwazi luthinteka ekucabangeni, futhi ube ne "ring" yeqiniso. U-HW Percival ungumuntu ongaziwa isintu, njengoba izipho zakhe zokubhala zizoveza, lapho kuphenywa ngokungakhethi. Ngimangalisa ukungabikho komsebenzi wakhe ezinhlokweni eziningi "ezifundiswayo" ekupheleni kwezincwadi eziningi ezibalulekile futhi ezibalulekile engizifundile. Ngempela ungenye yezimfihlakalo ezigcinwe kangcono emhlabeni wonke wamadoda okucabanga. Ukumomotheka okumnandi nemizwa yokubonga kukhishwa ngaphakathi, noma nini lapho ngicabanga ngalowo muntu obusisiwe, owaziwa emhlabeni wonke amadoda njengoHarold Waldwin Percival.
Ngemuva kweminyaka engu-30 ethatha amanothi amakhophi amaningi avela ezincwadini eziningi zengqondo, ifilosofi, isayensi, i-metaphysics, i-theosophy nezifundo ezihlobene nezihlobo, le ncwadi emangalisayo iyiphendule ephelele kulokho engangikufuna iminyaka eminingi kangaka. Njengoba ngithatha okuqukethwe lapho kukhona imiphumela engcono kakhulu engqondweni, ngokomzwelo nangokwenyama ngokuphefumulelwa okuphezulu ukuthi amagama akakwazi ukuveza. Ngicabanga ukuthi le ncwadi iyisisulu esikhulu futhi iveza ukuthi ngike ngathola injabulo yokufunda.
Incwadi enhle kunazo zonke engake ngazifunda; ijule kakhulu futhi ichaza konke ngobukhona bomuntu. UBuddha wathi kudala lowo mcabango ungunina wazo zonke izenzo. Akukho okungcono kunale ncwadi ukuchaza ngokuningiliziwe. Ngiyabonga.
Amazwi Abafundi Balo Magazini